Madaxda waqooyi bari oo ugu baaqay dowlada Kenya in shacabka ay barto macnaha Huduma Namba – Banaadir weyne
Madaxda waqooyi bari oo ugu baaqay dowlada Kenya in shacabka ay barto macnaha Huduma Namba
Qaar ka mid ah golaha wakiilada deegaanka ee ismaamulka Mandera ee gobolka waqooyi bari Kenya ayaa walaac ka muujiyay qaabka uu u socdo tirakoobka dadweynaha ee hanaanka casriga ah oo loo yaqaan Huduma Namba oo guud ahaan ka bilowday Kenya.
Kadib kulan lagu daahfuray ololaha tirakoobka dadweynaha arbacada maanta ah oo ka dhacay magaalada Mandera ayaa wakiilada deegaanka ee ismaamulka Mandera waxay sheegeen in dadweynaha aysan waxba ka fahan saneyn hanaanka Tirakoobka.
Afhayeenka golaha baarlamaanka hoose ee ismaamulka Mandera Mudane Maxamed Khaliif ayaa sheegay in uusan horay u fahamsaneyn ololaha Huduma Namba ilaa uu la kulmay gudoomiyaha Nabad gelyada ismaamulka Mandera.
Waxaa uu yiri waxaana arintaan fahmay markii uu ii wacay gudoomiyaha deetana uu iga codsaday in aa soo xaadiro mashruucan lagu daahfuray maanta magaalada.
Dhanka kale Mr Khaliif ayaa ugu baaqay in waqti badan ay qaadan doonto in shacabka ay fahmaan waxna ka bartaan muhiimada Mashruucaan uu u leeyahay.
Wakiilka laga soo doortay waaxda Neboi Mr Cabdi Adan Cali ayaa dhankiisa sheegay in bulshada ay ku jahawareer santahay Ololaha Tirakoobka dadweynaha ee Hudama Namba. – Universal TV Somali